Daryeelka roodhida ee dayrta | December 2019
Ugu Weyn Ee Daryeelka roodhida ee dayrta
Diyaarinta pear qaboobaha: Xaqiijinta daryeelka dayrta
Pear waa warshad aad u jilicsan oo u baahan daryeel caafimaad oo joogto ah. Gaar ahaan, tani waxay khuseysaa xilliga dayrta iyo diyaarinta jiilaalka. Maadaama noocyo badan oo pear ah aan u dulqaadan heerkulka hooseeyo liidashada, daryeelka dayrta waa in ay si gaar ah u qori kartaa, iyada oo la tixgelinayo dhammaan qodobbada muhiimka ah. Si fiican u daryeeli carrada, ciidda wanaagsan iyo bacriminta waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee keena xoogga geedka iyo dhalidda.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daryeelka roodhida ee dayrta 2019